Dargaggoon MN ‘Jabaa Keenna Ulfeeffanna’ Jedhanii Ganna 50essoo Alii Birraa Sirba Itti Jalqabe Kabajuufiitti Jiran | freedomfororomo
Posted by Itana Guteta on June 25, 2013
WASHINGTON,DC — Eeegee maqaa sirbaa itti baasan malee silaa maqaan warri baaseef,Alii Mohaammad Muusaa,sun qofan hin hamnee eegee hujiin ulfeessanii Dr.Ali Birraa ta’e. Alii Birraa gara ganna 14-15 keessa sirba jalqabe.
Namuu afaanuma ufiitiin sirbaa maanif anilleen kiyyana hin sirbine jedhee itti seene jedhe.Adoo akkanuma, afaan, aadaa, ummata,seenaa,siyaasaa fi waan hedduu faarsuu deemuma deemee ganna 50 gahe. Dargaggoon Oromoo, MN,Amerikaa jiranilleen “jabaa keenna ka jiruu ulfeeffannee,ka du’ee hujii isaatiin qaabannee galata galchinaaf,” jedhanii jabaa ulfeessuutti jiran. Warra hujii tanaa keessa jiru keessaa tokkoo Dr. Sintaayyoo Badhaaneeti,Atlaantaa,Amerikaa jira.
“Ali Birraa barsiisaa,qabsaawaa,Oromoo jedhee yaamaa…gaafa afaan Oromoo tuffatamee gadi qabamee …akka mataa ufiitti tahee warra Afran –Qallo waliin dabalamee…umrii isaa guutu tattafate.”
Akka Dr.Sintaayyootti, “jabaa keenna yo inni lubbuu dhabe qofa faarsuu qofaa mitii adoo innii lubbuun jiruullee faarsuu wayya.”
Qophiin tun waan Alii haga ammaa ummataa hojjate,jabeenna isaa faarsaniif.Seenaa isaa dubbachaa,kitaabatti barreessanii,vidiyoon qopheessanii lafa kaahuu. Hujii tana akka Dr.Sintaayyootti ijoollee gannii 20 keessa jirutti qopheessuutti jiraa…“namii ummataa ufiitif jedhee dabre kabaja argachuu qabaa addunyaalleen beekuuf dandeetti.”
Qophii dargaggoon MN qopheessite tana sirbitoota Oromoo 17 caalanitti itti dhufee ummata gamamchiisa.Warrii seenaa Alii Birraa barreesse,qorate hedduulleen akkanuma dhufa.
Maqaa aritistoota Oromoo ka jiranii fi du’anillee walti qabanii kaan galateeffachaa, kaan maqaa isaanii yaamanii hujii isaatiin ulfeessuuf qophiitti jiran.Guyyaan Alii Birraatii qopheessan kun Adoolessa 4,2013 irra oola,akka Dr.Sintaayyootti MN nama hedduutti kaan ispoortii,kaan marii fi bashannana gara garaatii walti dhufa.
← The Cost of Hunger in Ethiopia: Implications for the Growth and Transformation of Ethiopia
REPLAY – Oromos seek justice in Ethiopia: Why is the largest nation in Ethiopia also one of the most persecuted? →